कैलाशको कुटी: 6/1/09 - 7/1/09
Posted by कैलाश at 12:26 PM 14 comments Links to this post
Posted by कैलाश at 11:09 AM9comments Links to this post
केही समय अघि ब्लगर मित्र दीपकजीले "कैलाश जी यो लिङ्कुपिटाङ भनेको के हो?" भनेर सोध्नुभएको थियो। उहाँले सोधेको बखतमा मलाई एउटा अपरिचित ब्लगर मित्रको लिङ्कुपिटाङ नामक ब्लगको याद आएको थियो। उहाँले कहाँ सुन्नुभयो कुन्नी? "मैले सुनेअनुसार त्यो भनेको भोक लाग्यो भनेको रे हो?" भनेर मलाई सुनाउनुभयो। तर मलाई त त्यो शब्दको अर्थ त्यही हो भन्नेमा एकरत्ति पनि हेक्का नै थिएन। न त त्यो शब्द मैले त्यसअघि कतै सुनेको थिएँ।
गत शनिबार साथीहरुको विशेष इच्छाको कारण 'इकु the jungle man' हेर्न सिनेमा हलतिर लाग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा ठेलामठेल भीड थियो टिकट काट्ने काउन्टरदेखि बाहिरैसम्म। इकुको टिकट माग्दा 'छैन' भन्ने जवाफ पाएपछि धेरैले अरु नै फिल्मको टिकट लिने या फर्किने बाहेक उपाय थिएन। एउटै भवनमा थुप्रै फिल्म एकैपल्ट चलाएको हुनाले पनि चाहनेहरुले अर्को फिल्म हेर्ने विकल्प तै तै थियो। अरु पनि नेपाली फिल्म त्यही हलमा चलिरहेको थियो। इकु हेर्न नपाएकोमा अर्को नेपाली फिल्मलाई नै विकल्पमा रोज्यौ हामीले। तर आश्चर्य! नेपाली फिल्मको स्तर तथा बजार खस्केको कुरा यत्रतत्र चलेको बेलामा "नेपाली कुनैपनि छैन" भन्ने जवाफ पाउँदा त्यस दिन ठिक उल्टो भयो। कुनैपनि नेपाली फिल्मको टिकट र सीट छैन! आब्बुई!! "हिन्दी त आज नहेरौ क्यारा" भन्ने मेरो अनुरोधमा सबै साथीहरुले सहमति जनाए। त्यसपछि फिल्म हेर्ने बजेटले एउटा रेष्टुरेष्टमा गएर टन्न मःमः खाएर अघाएर आ-आफ्नो कुटीतिर लाग्यौँ।
हल पुगेर त्यसै फर्किनु पर्दा एक हिसाबले झ्याउँ लाग्दैथियो सबैलाई। तैपनि नेपाली फिल्म हेर्न पनि यत्तिका दर्शक हलमा आउँदा रहेछन् भन्ने लागेर हामी दंग थियौँ। नौलो स्वाद र प्रस्तुती लिएर आएको हुनाले नै इकु हेर्न धेरै दर्शकहरु हलसम्म पुगेका छन् सायद। हुन त शनिबार त्यसमाथि पनि बिहानीको शो भएकोले हुनसक्ला त्यत्तिका बिधि भीडभाड।
इकुको पोष्टर हेर्दै विद्यार्थीहरु
नेपाली फिल्म हेर्नेहरुको भीडमा, इकुको टिकट नपाएकाहरुको भीडमा उभिएर गफिरहँदा एउटा स्कूलको नेमप्लेट बोकेको ३ वटा गाडीबाट हुलका हूल विद्यार्थीहरु स्कूल पोशाकमै उत्रिएर हलतिरै आए। तब टिकट नपाउनुको कारण थाहा भयो। नत्र त टिकट काउन्टरमा बस्नेलाई बोल्ने फुर्सद कहाँ र! अनि लाइन लागेरै त्यत्रो सोधीरहने जाँगर पनि हामीमा कहाँ र! अनुशासित भइ लाइनमा बसेरै ती विद्यार्थीहरु खुरुखुरु फिल्म हलभित्र छिर्न थाले। इकु हेर्न लाइनमा बसेर हलभित्र छिर्दै विद्यार्थीहरु।
जंगली मान्छे-इकु प्रमुख पात्र भएपनि बालक अपहरणको कथाबस्तुलाई समेटिएको र ह्युमरस प्रस्तुती भएको चर्चा बजारमा फैलिएकोले पनि होला बच्चाहरुलाई हलसम्म पुर्याउने संयोजन खुद स्कूलले नै गरेको। संयोगबस साँझ कन्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने 'पवनकली' शो आउने समयमा टेलिभिजन खोल्न पुगेछु म। त्यस शोमा उही इकु-सुलेमान शंकर फिल्मी पात्रकै रुपमा पाहुना बनेर पवनकलीको कुटीमा झुल्किए- इकु इकु भन्दै । यताउती हेर्दै पवनकालीको घरको भित्तामा झुन्डिएको मकैको घोगातर्फ इशारा गर्दै भोक लगेको जनाउदै भन्छ- लिङ्कुपिटाङ लिङ्कुपिटाङ। तब मलाई दिपकजी र उहाको प्रश्नको याद आयो। त्यो त नेपाली टार्जन इकुको भाषा पो रहेछ। जो नेपाली टेलिचलचित्रमार्फत् ठुलो फिल्मको जगतमा प्रबेश गरेको छ अहिले।
Posted by कैलाश at 8:53 PM 15 comments Links to this post
Labels: गन्थन-मन्थन, संस्मरण